C/raxmaan C/Shakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo. - Awdinle Online
C/raxmaan C/Shakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo kamid ah musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee ku shirsan Magaalada Muqdisho ayaa eedeyn kulul u jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa uu sheegay in Shacabka Muqdisho ay soo dhaweeyeen, isaga oo Ra’iisul Wasaare ah, sidoo kale markii loo doortay Madaxweynaha ay taageersan, balse uusan u qaban wixii uu rabay.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlayay Arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo doonayo inaan kula tartano doorasho uu isaga firimbigeeda haayo.
”Madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu yiraahdo ciyaarta aan isla galno Firimbigana anaa Jeebka ku heysta adiga markii aad gacanta ku taabatana waan yeerinayaa ani hadaan ku taabtana lama yeerinaayo,nin isaga Firimbiga heeysto yaa la ciyaaraayo ayuu yiri” Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Previous articleGuddiyada doorashooyinka lagu muransan yahay oo laga dalbaday inay is casilaan
Next articleShariif Xasan oo ka digay in la musuq maasuqo doorashada